नेपाल र भारतले फुटबलमा हालसम्म १९ पटक एकअर्काको सामना गरिसकेका छन् । यी खेलमा नेपाल आफ्नो नाममा दुई पटक मात्र जित दर्ता गर्न सफल भयो । बिहीबार नेपालले भारतसँग २०औं प्रतिस्पर्धा गर्ने छ । दुई देशको खेलमा १३ पट...
नेपाल भर्सेस भारतः फुटबल मैदानमा कस्तो होला बिहीबारको खेल ?
बिहीबार नेपाली फुटबल प्रेमीका लागि एउटा विशेष दिन हुनेछ । नेपालले भारतसँग मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । अनि यी दुवै टोलीले एक अर्कालाई कडा प्रतिस्पर्धीका रुपमा लिएका छन् । त्यसैले पनि नेपाल र भारतबीचको ख...
पारसको १० वर्षे कप्तानीमा नेपाली क्रिकेटले नयाँ उचाइ लिएकोमा कसैको विमति नहोला । डिभिजन–५ मा अड्किएको नेपाली क्रिकेटलाई पारसले टी २० विश्वकप हुँदै एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउने अवस्थासम्म पुर्य...
वाट्मोरपछि कसको हातमा जाला नेपाली क्रिकेटको जिम्मेवारी ?
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका प्रमुख प्रशिक्षक डेभ वाट्मोरले नेपाली राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सम्हालेको आठ महिनामै राजीनामा दिएका छन्। उनलाई आइसिसीको सहमतिअनुरूप नेपाल क्रिकेट एसोसियसन (क्...